BOKY « NY FIANDOHAN’NY MALAGASY » : Hanampy amin’ny asa fikarohana eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 3:03
Zana-tsehatra teny amin'ny Oniversiten'Antananarivo no nisitraka ny Boky.
Accueil/Kolontsaina/BOKY « NY FIANDOHAN’NY MALAGASY » : Hanampy amin’ny asa fikarohana eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo
BOKY « NY FIANDOHAN’NY MALAGASY » : Hanampy amin’ny asa fikarohana eny amin’ny Oniversiten’Antananarivo
Tontosa teny Ankatso omaly ny fanolorana ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy » nataon’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ho an’ny Oniversiten’Antananarivo. Nitarika izany ny Minisitra Lalatiana Andriatongarivo sy ny mpiara-miasa aminy, niaraka tamin’ny Fiadidiana ny Oniversiten’Antananarivo notarihin’ny Filohan’ny oniversite. Ity farany zay nanamafy ny maha zava-dehibe ny fisitrahana ity boky ity ho an’ny asa fikarohana.
Taorian’ny fizarana sy fanolorana ny boky « Ny Fiandohan’ny Malagasy » tamin’ireo mpikaroka isan-tokony nanampy tamin’ny famoahana ity angom-pikarohana ity, manohy ny dingan’ny fanapariahana izany ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina. Natao laharam-pahamehana ny fanomezana ny boky, izay maimaim-poana, ho an’ireo sekoly sy ambaratonga samihafa tokony hisitraka izany, toy ny ivon-toeram-pamakiam-boky. Tafiditra tao anatin’ireo laharam-pahamehan’ny Minisitera ihany koa anefa ny fanolorana ity angom-pikarohana ity ho an’ny Anjerimanontolo, ka nisantatra izany ny oniversiten’Antananarivo. Nisitraka izany avokoa ireo sampam-pampianarana rehetra eny amin’ny Oniversiten’Ankatso, toy ny tao amin’ny Fakiolten’ny teny aman-tsoratra sy ny siansa maha olona, ireo zana-tsehatra toy ny lalàna, ny haifiarahamonina, ny haiolombelona, ny Serasera, ny tantara sy ny jeografia, ary ny zana-tsehatra Malagasy. Hisy ihany koa ny boky izay hapetraka ao amin’ny trano famakiam-bokin’ny anjerimanontolo, ka ho afaka ampiasain’ny mpianatra hanovozany fahalalana na hanaovana fikarohana.
Sehatra maro no voakasika
Tanjona napetraky ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, tamin’ny namokarana ny boky rahateo ny hanehoana ny hambom-po maha Malagasy, ny fandravonana ireo voka-pikarohana marolafy, ary indrindra handravana ireo hevi-diso mikasika ny fiandohan’ny Malagasy, araka ny fanazavana hatrany. Manamarika ihany koa ny fiizina ity angom-pikarohana navoaka ity. Nambaran-dRamatoa Minisitra Lalatiana Andriatongarivo nandritra ny lahateniny omaly, fa fanamby napetraky ny Fitondram-panjakana ankehitriny ho isan’ny laharam-pahamehana ny fanandratana ny kolontsaina ho fanoitra amin’ny fampandrosoana. Voarakitra rahateo ao anatin’ny fifanarahana (contrat programme) an’ny Minisiteran’ny Serasera sy ny Kolontsaina, ny manamafy ny maha izy azy ny firenena sy ny vahoaka ao aminy (identité). Tetsy ankilany, nilaza ny Filohan’ny Oniversiten’Antananarivo, Mamy Ravelomanana, fa hanampy betsaka ireo mpianatra amin’ny fikarohana ataony ny fahazoana ity boky ity. Nambaran’ity tomponandraikitra ity, fa sehatra maro no voakasika tao anatin’ny fikarohana marolafy momba ity fiandohan’ny malagasy ity. Dikany, tsy ny ao amin’ny fakiolten’ny Teny aman-tsoratra sy ny Siansa maha olona irery ihany no hahazo tombony amin’ny fahazoana ity boky ity fa ireo mpikaroka any amin’ny sampam-pianarana hafa koa, toy ny Siansa.
FIOVAN’NY TOETRANDRO ETO MADAGASIKARA : Ireo firenen-dehibe no tena tompon’antoka, manampy trotraka ny fandripahana ala